Hatreto, tsy misy ny Banky eto amin’ny distrikan’Ambohidratrimo hoy Randriamahandry Henintsoa Nirina, kandida tanora tsy miankina nametraka ny dosieny hilatsahan-kofidiana tetsy amin’ny OVEC Ambohidratrimo. Maro manampahaizana eny ary tsy vitsy ny liam-pivoarana saingy tsy afa-manoatra noho ny tsy fisian’ny asa. Betsaka mihitsy ireo tanora nahavita fianarana sy manana tetikasa maro saingy olana ny famatsiam-bola ary na ny Banky aza tsy misy. Ankoatr’izay koa anefa dia mila vola ireo tantsaha maro an’isa amin’iny distrikan’Ambohidratrimo iny amin’ny lafiny ara-pitaovana sy ny famoaham-bokatra ka tsy mila jerena manokana, hoy hatrany izy. Hampiroboroboana ny fampananana asa sy ny fandraisana andraikitra ataon’ny tanora sy ny tantsaha ny fisian’ny Banky ary ilaina sy ny manamora ny fotodrafitrasa tokony hatao any. Ireo tanora manampahaizana mandray andraikitra sy mpamboly matihanina izay maro an’isa ao Ambohidratrimo no tena ilaina atosika hoy hatrany ity kandida tsy miankina ity
Kandida ben’ny tanàna tsy miankina eny Ambohidratrimo Randriamahandry Henintsoa Nirina